“Griezmann qalad ayuu sameeyay markii uu u dhaqaaqay Barcelona.” – daafac hore Barcelona ah - Hargeele - Wararka Somali State
(Barcelona) 23 Feb 2021. Daaficii hore kooxda Barcelona ee Jérémy Mathieu ayaa sheegay in ninka ay dhalashada wadaagaan ee Antoine Griezmann uu qalad ku galay u dhaqaaqida iyo u ciyaarida naadiga Barca, isagoo tilmaamay inuu aad uga fogaaday heerkii uu lahaa markii uu la joogay Atletico Madrid.
Antoine Griezmann ayaa u dhaqaaqay Barcelona xagaagii 2019, iyadoo qiyaastii 120 million euros, uu kaga yimid kooxda Atletico Madrid.
Qof walba wuxuu filayay in Antoine Griezmann uu ku fiicnaan doono kooxda Barcelona, laakiin wali wuxuu la qabsan la’yahay qaabka looga ciyaaro halkaas, wuxuuna haatan wajahayaa dhaleeceyn badan sababo la xiriira inuusan wali ku soo laabanin heerkiisii ​​caadiga ahaa.
Jérémy Mathieu ayaa wareysi uu ku bixiyay raadiyaha “Rak 1” wuxuu kaga hadlay xaalada uu Antoine Griezmann kaga sugan yahay kooxda Barcelona, wuxuuna yiri:
“Antoine Jerizman wuxuu noqday mid ka fog qaab ciyaareedkii Atletico Madrid.”
“Shaqsi ahaan, waxaan arkaa in Antoine Griezmann uu qalad sameeyay markii uu u dhaqaaqay u ciyaarista Barcelona.”
Waxaa xusid mudan in Antoine Griezmann uu ka qayb qaatay Barcelona ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan 34 kulan, wuxuu dhaliyay 12 gool, wuxuuna caawiyay 10 gool kale.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Real Madrid Iyo Valencia ee tartanka Spanish Super Cup oo la shaaciyey